MizEducation Podcast တွင် Block Organizing လုပ်ခြင်း• DutchtownSTL.org • Dutchtown, St. Louis, MO
MizEducation Podcast တွင်ဖွဲ့စည်းခြင်းကိုပိတ်ပင်ပါ
အပေါ် Posted မတ်လ 6th, 2021
သင်နားထောင်ပြီးပြီလား MizEducationDutchtown-based podcast အသစ်? Dutchtown အိမ်နီးချင်းများ LaTasha Smith နှင့် Staci Lindsey တို့သည်ပတ် ၀ န်းကျင် Podcast တခုကိုအိမ်ရှင်အဖြစ်လက်ခံကျင်းပပြီးစိန့်လူးဝစ္စမြို့နေလူထုအတွက်အရေးကြီးသောကိစ္စရပ်များနှင့် ပတ်သက်၍ ဆွေးနွေးနေကြသည်။
မကြာသေးမီက Podcast တခုကိုထုတ်တဲ့အချိန်မှာ၊ MizEducation သည် Joel Silliman နှင့်ပြောဆိုခဲ့သည်အပေါ်ပိတ်ပင်တားဆီးမှုကပ္ပတိန် Louisiana ၏ 4200 ပိတ်ပင်တားဆီးမှု နှင့်ရန်အားထုတ်မှု၏ခေါင်းဆောင်တ ဦး Dutchtown တွင်လုပ်ကွက်များကိုစည်းရုံးသည်။ Joel, Tasha နှင့် Staci တို့သည်သူတို့၏ပိတ်ပင်တားဆီးမှုစည်းရုံးရေးအားထုတ်မှု၏ရင်းမြစ်၊ မည်သည့်အရာနှင့်အလုပ်လုပ်သည်၊ မည်သည့်အရာမရှိကြောင်းနှင့်ပိုမိုကျယ်ပြန့်သောအသိုင်းအဝိုင်းကိုတည်ဆောက်ရန်အတွက်၎င်းတို့၏ရပ်ကွက်များကိုစုစည်းရန်မည်သို့ရပ်ကွက်အတွင်းနှင့်အခြားဒေသများမှနေထိုင်သူများကိုဆွေးနွေးကြသည်။
ဒါကြောင့်သင့်ရဲ့ပိတ်ပင်တားဆီးမှုကိုစုစည်းဖို့ဘာလုပ်သလဲ? ကျနော်တို့အတူတူထားပြီးပြီ လမ်းညွှန် သင်၏အိမ်နီးချင်းများနှင့်အပြန်အလှန်ဆက်သွယ်နိုင်ရန်၊ သူတို့ကို ဆက်သွယ်၍ စေ့စပ်ထားရန်၊ ရပ်ကွက်အတွင်းအရင်းအမြစ်များကိုသို့ plug။ သင်စတင်ကူညီရန်ပိုမိုလိုအပ်ပါကဂျိုဝဲလ်နှင့်အခြားစေတနာ့ဝန်ထမ်းများကသင့်အားလုပ်ငန်းစဉ်ကိုလျှောက်လှမ်းနိုင်ရန်နှင့်သင်၏လုပ်ကွက်၏လိုအပ်ချက်များနှင့်လိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်ကူညီရန်အဆင်သင့်ရှိသည်။
MizEducation Podcast ကိုဘယ်မှာရှာရမလဲ။
အသစ်ဖြစ်စဉ်များ MizEducation အပတ်တိုင်းထွက်လာကြ။ သင်နားထောင်ပြီးစာရင်းသွင်းနိုင်သည် Spotify, Apple က podcasts များ, အိတ်ကပ် Castနှင့် Google က podcasts များ။ အတိတ်ဖြစ်စဉ်များကိုစိန့်လူးဝစ္စမြို့တော်ဝန်မြို့တော်ဝန် Tishaura Jones နှင့် Sal Martinez မှ Cara Spencer နှင့်ဆွေးနွေးမှုများပြုလုပ်ခဲ့သည် အလုပ်အကိုင်ချိတ်ဆက်မှု အကြမ်းဖက်မှုကိုပျောက်ကင်းအောင်ကုသပေးနိုင်ခြင်းနှင့်အကြမ်းဖက်မှုကိုဟဲလ်ဖလဲန်းမင်း ရည်ရွယ်ချက်ပညာရေးဆိုင်ရာန်ဆောင်မှု၌တည်၏။ ခေါင်းစဉ်အသစ်များနှင့် guests ည့်သည်များများစွာသည်လမ်းပေါ်တွင်ရှိနေသည်။
အောက်မှာ Filed လုပ်ကွက်. အမျိုးအစားအားလုံးကိုပြပါ. လုပ်ကွက်. အမျိုးအစားနည်းနည်းပြပါ.
ဒိန်းမတ် လုပ်ကွက် MizEducation Podcast တွင်ဖွဲ့စည်းခြင်းကိုပိတ်ပင်ပါ